Banyere Anyị - Jiangsu Luck PV-Tech Co., Ltd.
Jiangsu Reeco Logic Co., Ltd bụ otu n'ime ọtụtụ ndị nrụpụta igwe modul na ụwa. Ọ na - enye ọtụtụ ngwa ahịa maka nrụnye PV: modulu anyanwụ, ndị na - achọ inyogharị, sistemụ igwe fotovoltaic, sistemụ iji aka nke onwe, e-agagharị, nlele nrụnye pv na ngwa. Relọ ọrụ Reeco Logic na-ekesa ngwaahịa anyanwụ ya ma na-ere ahịa ya na ọrụ ya n'ọtụtụ mba ụwa, azụmahịa na ebe obibi ndị ahịa na China, Germany, Italy, Spain, France, Belgium, United Arab Emirates na obodo na mpaghara ndị ọzọ.
N'ilekwasị anya na sistemụ ume, ịchekwa, nnyefe, nkesa na oriri, Jiangsu Reeco Logic nwere azụmahịa azụmaahịa nke ike dị ọcha, nkesa ike, nnukwu data na ọrụ mgbakwunye ike. Ọzọkwa, azụmaahịa nke ogidi ya gụnyere akụrụngwa fotovoltaic, nchekwa ike, nnyefe ike & nkesa, ngwa eletriki dị ala, ọnụ ọgụgụ isi, mmepe software na akpaaka njikwa. N'ịzụlite n'ime ụlọ ọrụ ikpo okwu, Reeco Logic na-enye ngwungwu nke ike ume maka ụlọ ọrụ ọha na eze, ndị ọrụ mmepụta ihe & ndị ahịa na ndị ọrụ njedebe, site na iwu mpaghara ume ọrụ mpaghara.
Jiangsu Reeco Logic erutela ahịa kwa afọ nke ijeri dollar 10 na 2019, yana ndị ọrụ 1000 ga-enwe ndị enyemaka na Europe. Ihe a niile na - eme ka Reeco Logic bụrụ onye ọrụ ọkachamara maka ndị nrụnye PV. Maka ndị ahịa ọ bụla na ọrụ ọ bụla, site na ụlọ ezinụlọ ruo na ogige ntụrụndụ anyanwụ. Ndị ahịa a zụrụ azụ na otu ndị ọrụ aka ga-enwe obi ụtọ ịza ajụjụ gị niile gbasara isiokwu nke fotovoltaics. Mara anyị ma hụ n'onwe gị na anyị bụ ezigbo onye mmekọ gị! Kpọọ anyị, degara anyị akwụkwọ ozi ma ọ bụ leta anyị na ụlọ ọrụ anyị. Anyị na-ele anya iso gị rụọ ọrụ.
On-Grid Inverter, On Off Grid Hybrid Inverter, Fortuner Hybrid Inverter, Off-Grid Inverter, Darfon H5001 Hybrid Inverter, Systeme Solaire,